လယ်ပြင်ကွန်ကရစ်အလုပ်လုပ်တင်ဒါရလဒ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောနေရာများဖျော်ဖြေ Izmir ဆိပ်ကမ်း - rayhab ဖြစ်ပါသည်
30 / 07 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ 0
ကွန်ကရစ်အမျိုးမျိုးသောနေရာများအတွက်ကောက်ယူလေလံ၏ရလဒ်များကို Izmir ဆိပ်ခံတံတားအကွက်ဖြစ်၏
အဆိုပါဧရိယာအခန်းများတွင်အမျိုးမျိုးသောနေရာများအတွက် Izmir ဆိပ်ကမ်း Yard, concreting အကျင့်ကိုကျင့်၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက်လေလံရလဒ်ပြုသောအမှု
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးအမျိုးမျိုးသောနေရာများအခန်း၏လယ်ပြင်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ 2019 TL Izmir ဆိပ်ကမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကုန်ကျထားတဲ့ Izmir ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 330919 / 1.441.815,32 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 1.986.388,69 TL, နောက်ဆုံးရလာဒ်များနှင့်အညီပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါ 43 ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနု၏ concreting အကျင့်ကိုကျင့်ကိုမပူဇော်ရသောဒေသများ အဆိုပြုချက်ကို Ismail AVCI တည်ဆောက်နေ-ခရီးသွားလုပ်ငန်း tweaking နှင့်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ LIMITED ဖက်စပ်ဖြစ်လာသည်။ နှုန်း 1.448.716,00 နုလေလံပါဝင် 11 ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နူးညံ့သော, တစ်ဦးစုစုပေါင်း 9000 အတူယုတျညံ့ဒေသများ၏ concreting ဆိပ်ကမ်းဧရိယာ၏ TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှုမြှောင်းပုံဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဖုံးလွှမ်းချိတ်ဆက် manhole လိုင်းပိုက်အောင်အရှည်,2မီတာရှည်လျားသောရေနုတ်မြောင်းရုပ်သံလိုင်းသက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် 100 မီတာအတွက်တော mxnumx ။ ပေးပို့အလုပ် 260 (တရာရှစ်ဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သိုးထိန်းနှင့်İhsaniyeအတွက်အထွေထွေအလုပ်လုပ်ကွင်းဆင်းဘူတာနှင့်အတူဘိန်း Fields ဘူတာ 15 / 06 / 2018 သိုးထိန်းနှင့်İhsaniyeအတွက် STATE ရထားလမ်း Administration ကွင်းဆင်းဘူတာ (TCDD)7၏အထွေထွေအလုပ်လုပ်သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူဘိန်း Fields ဘူတာ။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံးဘိန်း Fields ဘူတာအိတ်ဖွင့်တင်ဒါသိုးထိန်းနှင့်အတူထိုအမျိုးမျိုးသော Fields ဘူတာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက်İhsaniyeအဆိုအရအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်အလုပ်လုပ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 288405 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: အလီ Cetinkaya mAh ။ Silo များလမ်း CAD ။ NO:2/ 1 03030 AFYONKARAHİSARဗဟို / AFYONKARAHİSARခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2722137621 - 2722141937 က c) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အတင်ပို့ချ၏ပျော်စေလုပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဝါးအလုပ်လုပ် 17 / 10 / 2017 အဆိုပါသင်္ဘောများနှင့်ရေးရာလုပ်ငန်းအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD)3ပက်ဖြန်း၏ပြည်နယ်မီးရထား၏လုပ်ခြင်းချပျော်စေ။ REGION ဝယ်ယူပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေး TCDD xnumxbölgနှင့် Inventory Control ကိုညွှန်ကြားမှုပိုးသတ်ဆေးများတင်ပို့ခြင်းနှင့်ချမှတ်ခြင်းချသန့်ရှင်းမှု၏ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်၏ကော်မရှင်ဗျူရို3အပိုဒ်အရသိရသည်တစ်ခုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကို 4734 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ်ငှားရမ်းနေသောကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့်အတူအဆောက်အဦးများနှင့် outbuildings နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2017 503108-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 1 121 Alsancak KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စက်လမ်းကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းအလုပ်လုပ်၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအောင်လိုက်တဲ့အခါ 31 / 07 / 2014 စက်လမ်းကို Maintenance နှင့် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအောင်၏ပြုပြင်ရေးအလုပ်လုပ်။ ဒေသဆိုင်ရာရုံးသုံးပစ္စည်း SERVICES စက်လမ်းကို Maintenance နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အလုပ်မှာဝယ်ယူရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဝယ်ယူအောင်၏ပြုပြင်ရေးအလုပ်လုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 88716 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း 1 58030 Sivas / Sivas ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462217000 - 3462237677 ဂ) e-mail လိပ်စာ: အ @ TCDD xnumxbolgeihalekomisyo ။ gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်: ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စက်လမ်းကို Maintenance နှင့်သံသယစီးပွားရေးအောင်၏ပြုပြင်ရေးအလုပ်လုပ် 08 / 02 / 2019 စက်လမ်းကို Maintenance နှင့် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)4၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုစီးပွားရေး TC အထွေထွေဒါရိုက်တာအောင်၏ပြုပြင်ရေးအလုပ်လုပ်။ ဒေသန္တရရုံးဝယ်ယူရေးနှင့်ပြုပြုပြင်အလုပ်န်ဆောင်မှုများရောင်း၏စက်လုပ်ငန်း Inventory CONTROL SERVICE ကိုလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း။ အမှတ် 4734 ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူအပိုဒ် 19 အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 53893 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာလမ်း 1 58030 Sivas / Sivas ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462217000 - 3462237677 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgesatinal Up ကို @ TCDD ။ သုံးယောကျ gov.t) ...
Izmir ဆိပ်ကမ်း Yard ၏ Concreting အလုပ်လုပ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လက်ဝါးကပ်တိုင်Sekidüzဆင်ခြေဖုံး၏ Senyurt Mardin စခန်းများတင်ဒါ Making ၏ကြားဖြတ် Spent စီစဉ်ထား Load Center ကအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် superstructure အကျင့်ကိုကျင့်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သိုးထိန်းနှင့်İhsaniyeအတွက်အထွေထွေအလုပ်လုပ်ကွင်းဆင်းဘူတာနှင့်အတူဘိန်း Fields ဘူတာ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စက်လမ်းကို Maintenance နှင့်သံသယစီးပွားရေးအောင်၏ပြုပြင်ရေးအလုပ်လုပ်